ढुक्क हुनुस्, अब लोडसेडिङ तालिका आउँदैनः कुलमान
काठमाण्डाै । कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनासाथ राजधानी उपत्यका र आपसापका जिल्लामा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। तिहारको झिलिमिलीपछि लोडसेडिङ बढ्ने त्रास थियो तर, अचानक लोडसेडिङ गायब भयो।
मान्छे चकित छन् आखिर के चमत्कार गरे कुलमानले? यो चमत्कार होइन भने बिजुली कहाँ थियो भन्ने प्रश्न जीतितै छ। किनकी १३ वर्षदेखि जनता अध्यारोको प्रताडना भोग्न बाध्य थिए। अहिले विद्युत प्रणालीमा बिजुली नथपिए पनि लोडसेडिङ समाप्त भएको छ।
विगतका वर्षमा पनि लोडसेडिङको चर्चा हुन्थ्यो, यस वर्ष पनि यसैको चर्चा भइरहेको छ। फरक यति मात्र छ, विगतमा कति घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने चर्चा हुन्थ्यो भने यस वर्ष कसरी लोडसेडिङ अन्त्य भनयो भन्ने जिज्ञासा।
त्यही जिज्ञासा कार्यकारी निर्देशन घिसिङसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको कुराकानीका क्रममा घिसिङले अब लोडसेडिङको तालिका नआउने बताएका छन्। उनले उपभोक्तालाई ढुक्क हुन समेत आग्रह गरेका छन्।अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
यस कारण, दोब्बर भयो कुखुराको मासुको भाउ !
घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिने
बुटवलमा हत्या गरेर शव लुकाउन बागलुङ पुर्‍याएपछि...
हेटौंडा–धरान सडक अन्तिम चरणमा
नयाँ वर्ष शुभारम्भसंगै चित्लाङका रिसोर्ट र होमस्टेमा चहलपहल झन बढ्यो
जबरजस्ती सम्बन्धबाट बसेको ८ महिनाको गर्भ फालेपछि...
जुकालाई टोकाएर यसरी निको पारिन्छ रोग
असुरक्षित बन्दै काठमाडौँ
वृद्ध आमाबाबुलाई परित्याग गरे तीन वर्ष कैद
बागमती प्रदेशमा छ दिन अघिबाट संक्रमित बढ्यो
एमालेको राजनीति, नेपाल पक्षको कार्यकर्ता कति ?
थाहानगरमा पानी हैन असिना, डामाडोल भयो किसानको 'पसिना' ! (हेर्नुहोस फोटोहरु)
थाहानगरमा हिउँ हैन, असिना [हेर्नुहोस् फोटो फिचर]
चितवनमा दुर्घटनामा परी एक वर्षमा ११६ जनाको मृत्यु
बसको ठक्करबाट एम्बुलेन्स चालकको मृत्यु
सुनको मूल्य तोलामा सात सयले बढ्यो
हात्तीको आक्रमणबाट किसानको मृत्यु
थाहानगरको शिखरकोटमा ट्याक्टर दुर्घटना
कोरोनाः १४ जिल्लामा विद्यालय पनि नजान अपील
लागूऔषध गाँजासहित मकवानपुरबाट तीनजना पक्राउ